मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नोभेम्वर १ देखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था – Rapti Khabar
कार्त्तिक १५, काठमाडौं । मलेसियामा रिहायरिंग मार्फत तथा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न चाहने रोजगारदाताहरुले त्यसका लागि माई फ्यूचरजव्स मा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी नोभेम्वर १ देखि लागु हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गरिएको मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम शरभनानले बताएका छन् ।
मलेसियामा विदेशी श्रमिक लिन कडाईको संकेत
मलेसियामा रिहायरिंग मार्फत तथा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न चाहने रोजगारदाताहरुले त्यसका लागि माई फ्यूचरजव्स मा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी नोभेम्वर १ देखि लागु हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गरिएको मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम शरभनानले बताएका छन् ।
मलेमेलमा प्रकाशित बनर्माद्दारा प्रेषित समाचारमा भनिएको छः ९मानव संशाधन० मन्त्री शरभनानले यस्तो विज्ञापन १४ दिनभन्दा कम समयको हुन नहुने र ईच्छुकले आवेदन दिन ३० दिनको समय प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका छन् । यसरी आवेदन दिनेहरुको अन्तर्वार्ता रोजगारदाता तथा सोसल सेक्यूरिटी अर्गनाईजेशन (सोक्सो) का प्रतिनिधिले लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मलेसियामा ६ जना नेपाली सुरक्षा गार्डको उद्धार
मलेसियामा बाध्यकारी श्रममा लगाइएका ६ जना नेपाली सुरक्षा गार्डको अध्यागमन विभागले उद्धार गरेको छ । ३० देखि ४० बर्ष उमेर समुहका उनीहरुलाई गत अक्टोवर २७ का दिन विशेष सर्च अभियान सञ्चालन गरेर उद्धार गरिएको हो ।
प्राप्त सुचनाका आधारमा श्रमिक बस्ने होष्टलमा पुगेर विभागले उनीहरुको उद्धार गरेको हो, मलेशियाको अनलाइन द स्टारले लेखेको छ । होष्टलमा ६ जना नेपालीहरु भेटिए जो धेरै अप्ठ्यारोसँग त्यहाँ बसेका थिए विभागका महानिर्देशकले भनेका छन् । ति ६ जनाले आफूहरुलाई विगत ६ महिनादेख भनिए अनुसार तलव नदिइएको तर बाध्य बनाएर काममा लगाइएको बताएका थिए । उनीहरुले दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक बस्तु समेत रोजगारदाताले नदिएको बताएका छन् ।
होष्टलबाट उद्धार गरिएकाहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको र उनीहरुमा कोरोना संक्रमण भनें नदेखिएको जनाइएको छ । उनीहरुलाई सुरक्षित आवास गृहमा राखिएको तथा रोजगारदातालाई यस बारेमा जानकारी दिन बोलाइएको समाचारमा जनाइएको छ । सो घटनालाई मानव बेचविखन तथा मानव तस्करीको अभियोग अन्तर्गत छानविन सुर भएको महानिर्देशकले बताएका छन् ।
करियर राशिफलअनुसार यस पटक वृष राशीका ब्यक्तिलाई मालामाल हुने देखिएको छ । यी राशीका ब्यक्तिले आजका दिन लिने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ भने तुला राशीका ब्यक्तिका लागी भने कार्यक्षेत्रमा निराशा भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । अन्य कुन कुन राशीको आज करियर राशिफल कस्तो छ त ? मेष राशी बिजनेसमा पार्टनरबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा […]
काठमाडौं, भदौ २३ नेपालमा अब बिस्तारै वर्षा कम हुँदै गएको र चिसो बढ्दै गएको मौसमविद्ले बताएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार वर्षा हुने क्रम जारी नै रहे पनि पहिलेको तुलनामा मात्रा कम हुँदै गएको हो। ‘अहिले दुई/तीन घण्टा पानी पर्दा पहिले एक घण्टा परेजतिको प्रभाव पर्छ,’ मंगलबार बिहान कुरा गर्दै उनले […]
काठमाडौंमा थपिए ५ ८३ कोरोना संक्रमित, देशभर कुन जिल्लामा कति थपिए ? (विवरणसहित)
असोज १०, काठमाडौँ । बितेको २४ घण्टामा काठमाडौंमा थप ५८३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये महिला १९९ र पुरुष ३८४ जना रहेका छन् । यस्तै भक्तपुरमा ६३ र ललितपुरमा ७८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी जम्मा ७२४ जनामा संक्रमण पुष्टि […]